Kungani izinwele zikhula emhlane nokuthi zisuswa kanjani | Amadoda anesitayela
U-Alicia tomero | 21/05/2022 11:28 | Kugundiwe, Ukunakekelwa komuntu siqu
Izingoma zobuhle emadodeni ziya ngokuya zilungiswa zibe yizivumelwano eziqinile ezinendikimba ethi izinwele zomzimba. Ukuthi indoda izizwa icindezelekile ngemuva kwezinwele akusho ukuthi ayingeni entweni ephoqelelwe, kodwa ngokuqinisekile ifuna ukwazi kungani izinwele zikhula emhlane nokuthi zingasuswa kanjani
izixazululo ziningi futhi cishe konke okunikezwayo kungokwesikhashana. Ukususwa kwezinwele nge-laser kuphela yikhona okungagcina kusele izinwele kunoma iyiphi ingxenye yomzimba ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa inqubo yokwelashwa ngayinye ayihambisani nesabelomali osifunayo, noma ngesiqiniseko sokusho ukuthi ngeke kuhlupheke kancane.
1 Kungani izinwele zimila emhlane?
2 Indlela ukususa izinwele ngemuva
2.2 Ukhilimu odilikayo
2.4 ukususwa kwezinwele ze-laser
Kungani izinwele zimila emhlane?
Amadoda avame ukuba nezinwele eziningi kunabesifazane ngenxa yezinga eliphezulu le-testosterone, i-hormone ethinta ukukhula kwezinwele. Amadoda amaningi ahlushwa izinwele ezicolekile, noma eziminyene, kuye ngofuzo lwakho. Kodwa okuqinisekileyo ukuthi zingase zibonakale njenge-hypertrichosis, i-pathology ephethwe lapho izinwele zingakhula ngokweqile, kuhlanganise nomhlane.
Abesifazane nabo bahlushwa enye i-pathology ebizwa hirsutism, lapho nazo zihlushwa a ukukhula kwezinwele ngokweqile ezingxenyeni eziningi zomzimba wakhe, ngisho nokuba ngenye yalezo zindawo ngemuva. I-Hirsutism ngokuvamile iyisibonakaliso sokugula okukhulu noma inkomba yokuphazamiseka.
Abesifazane bangase baphathwe i-polycystic ovary, umdlavuza wesibeletho, i-hyperthecosis (ukwanda kokukhiqizwa kwesibeletho), isimila ezindlaleni ze-adrenal, i-Cushing's syndrome (i-corticosteroids eyeqile) noma ukuphuza imithi ethile ekhulula amahomoni wesilisa. Konke lokhu kuzothinta ukuba nezinwele. Akuvamile ukuthi bathole ukuba nayo emhlane, kodwa kungaba njalo.
Indlela ukususa izinwele ngemuva
Abesifazane banganciphisa izinwele zabo ngokwenza ukuqondiswa kwezokwelapha futhi uphathe inkinga yakho ye-hormonal ngosizo lwe-endocrinologist noma i-gynecologist. Ngakolunye uhlangothi, ungakwazi futhi ukunciphisa izinwele ngokweqile ngokusebenzisa a ukwelashwa kwezimonyo noma nge-laser.
Amadoda angakwazi futhi ukuqondisa udokotela uma kukhona noma yiluphi uhlobo ukuphazamiseka kwe-hormonal noma i-endocrine. Kodwa-ke, njengoba ezimweni eziningi, kuzodingeka uphendukele kuzo ukwelashwa kobuhle ukuqeda izinwele ezibonakalayo.
Kuwuhlelo olulula, olusheshayo nolungenabuhlungu. Uzodinga usizo lomunye umuntu ukuze akusize ususe izinwele kuzo zonke lezo zindawo ongakwazi ukufinyelela kuzo. Indlela engcono kakhulu yokuqala ukugunda zonke izinwele eziwugqinsi neziwugqinsi ngosizo lwesikelo.
Ukubuyekezwa okuhle kakhulu kungenziwa kamuva ngosizo lwe umshini wokushefa enokusikwa okuningi kusethi yekhanda layo. Khumbula ukuthi ukushefa ngensingo ayiqinise ngokuphelele izinwele emhlane. Ukushefa kwangempela kufinyelelwa nge-blade futhi ngenxa yalokhu kufanele kwenziwe ngendlela efanayo ukushefa okutholakala ngayo ebusweni.
sizothola ukushefa ijeli noma igwebu bese uvala wonke umhlane ngokhilimu. Khona-ke sizothola ukushefa ngokuhambisa i-blade ngokumelene nesiqondiso sezinwele, yebo, kungcono ngosizo lomunye umuntu futhi eduze nesinki ukuhlanza i-blade ekubuyekezweni ngakunye.
Kuyalulekwa ishawa ngemva kokushefa ukususa noma yiziphi izinwele ezixekethile. Khona-ke kufanele ubambe indawo yomile ukuze ungayicasula kakhulu futhi gcoba amafutha okugcoba angenawo amakha ukuze udambise ukucasuka okungenzeka.
Kungenye indlela yokususa izinwele, lapho izinwele ziphuthunyiswa ngendlela efanayo nokushefa. Lawa ma-creams aqukethe amakhemikhali asebenza ku-keratin yezinwele futhi abangele ukuthi zibhujiswe. Ukhilimu usetshenziswa esikhumbeni esinezinwele, ushiywe ukuze usebenze imizuzu embalwa bese Isuswa ngesandla ngosizo lwe-spatula. Ngalolu hlobo lokushefa izinwele zithatha isikhathi eside ukuphuma futhi njengenjwayelo kungcono ukuthola umuntu ozokusiza ngokushefa.
I-waxing yindlela elula, kodwa nge-drawback ukuthi kungaba buhlungu kakhulu, kunabantu abangakwazi ukubekezelela ukususwa kwezinwele. Iqiniso liwukuthi izinwele zizothatha isikhathi eside ukuphuma.
Kuyindlela engcono kakhulu yokuqeda izinwele zomzimba. Ukwelashwa okumba eqolo futhi kuthatha izinyanga ezimbalwa zokwelapha ukumisa izinwele ukuthi zingakhuli. I-laser izosetshenziswa endaweni ukubhubhisa izinwele zezinwele kanye vimbela noma ubambezele ukukhula kwezinwele. Ezimweni eziningi, ukususwa kwezinwele nge-laser kuvame ukusebenza kahle kakhulu, kodwa kwezinye izimo kuyodingeka iseshini yokulungisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Kungani izinwele zikhula emhlane nokuthi zingasuswa kanjani